Morontsiraka Lovina any Bali. Indonezia " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Morontsiraka Lovina any Bali. Indonezia
Topimaso momba ny torapasika Lovina any Bali
Ity morontsiraka ity dia iray amin'ireo toerana fizahan-tany malaza indrindra any avaratry Bali. I Lovina Beach dia mirehareha fasika mainty sy madio ary 9 km miala eo no misy azy Singaraji... Ny moron-dranomasin'i Lovina dia rakotra fasika mainty (miaraka amin'ny loko volontany), izay avy amin'ny volkano. Kely ny haavon'ny onja eto. Eto ianao dia afaka milomano, misitrika, snorkel ary trondro. Lovina dia safidy tsara amin'ny fialantsasatra mangina miaraka amin'ny fianakaviana iray manontolo.
Sarivongana feso feso iray eny amoron-dranomasina Lovina
Ny Lovina Beach dia miorina eo amin'ny faritry ny Resort Bali izay mitovy anarana aminy. Ny halavan'ity morontsiraka ity dia tena manan-danja - manodidina ny 8 km. Milamina tsara ny ranomasina eto, madio sy madio ny rano.
Ny anarana amoron-dranomasina dia nahazo ny anarany "Lovina" tamin'ny teny anglisy "Love" (love) sy ny teny indonezianina "Ina ”(reny). Azo inoana fa maneho ny fitiavana ny Bali amin'ny taniny izy io.
Tombony sy fotodrafitrasa amoron-dranomasina
Na dia lavitra amin'ny toeram-pialantsasatra malaza sy tanàna lehibe any Bali aza ny fialan-tsasatr'i Lovina, manana fotodrafitrasa mandroso tsara izy io. Noho ny onjan-drano ambany dia tsy mety amin'ny onja-dranomasina ny morontsiraka. Saingy misy ny fepetra tena tsara momba ny snorkeling sy ny antsitrika, ny milomano ao anaty ranomasina ary ny filentehan'ny masoandro. Ao Lovin koa dia misy dolphinarium, izay hita eo amin'ny ranomasina misokatra, izay hodinihintsika etsy ambany. Misy trano fisakafoanana sy fisotroana eo akaikin'ny morontsiraka misy mozika.
Zavatra tokony hatao any Lovina, Bali
Kilasy fandrahoan-tsakafo izay natao tao amin'ny tanàna akaiky an'i Kaliasem.
Tsy tokony hatao ny mitsidika an'i Lovina amin'ny volana febroary, martsa ary aprily, satria mandritra io vanim-potoana io dia maloto ny torapasika ary tsy fahita firy ny feso feso any an-dranomasina. Ny fotoana tsara indrindra amin'ny snorkeling sy ny antsitrika dia ny maraina, satria io no rano madio sy mazava. Tsara ihany koa ny mankafy ireo feso amin'ny maraina, satria amin'izao dia efa zatra milomano manakaiky ny morontsiraka izy ireo.
Dolphinarium any Lovina
Diniho. ny dolphinarium any Lovina dia tsy dolphinarium amin'ny hevitry ny teny mahazatra. Amin'ity tranga ity, miresaka momba ny faritra iray kilometatra kilometatra miala ny morontsiraka isika, izay ilomanin'ireo feso feso isan'andro. Ity faritany ity dia tsy fefy amin'ny lafiny rehetra, noho izany dia tsy dolphinarium izy io fa mijery feso fotsiny.
Dolphinarium (mijery feso feso) any Lovinj. Bali
Isan'andro alohan'ny mangiran-dratsy dia sambo maro no miala amin'ny morontsirak'i Lovina miaraka amin'ireo izay te-hidera ireo feso. Ny serivisy an-tsambo toy izany dia atolotra hatraiza hatraiza, satria io ihany no fomba ahazoana vola ho an'ny mponina maro.
Afaka tonga eo amoron-dranomasina ianao amin'ny 5 ora sy sasany maraina, ary azonao antoka fa hanana fotoana handany adiny roa amin'ny ranomasina mitazana trondro. Eo am-piandohan'ity pejy ity dia afaka jerena amin'ny sary misy ny sambo (ity no sambo mpanjono indoneziana "Jukung").
Ny Lovina Beach dia miorina amin'ny morontsiraka avaratry Bali amin'ny faritry ny toeram-ponenana amin'ny anarany mitovy, 9 km miala an'i Singaraja (Faritanin'i Buleleng)
adiresy: Morontsiraka Lovina
mandrindra: -8.159311, 115.025636
Tora-pasika Lovina amin'ny sarintany zanabolana Bali
Sarin'ny tora-pasika Lovina any Bali
Milomano maraina mankany amin'ny feso
Ny fotodrafitrasa eny amoron-dranomasina Lovina dia tsotra nefa ampy.
Ny fasika amoron-dranomasina indraindray dia mitovy amin'ny tany mahazatra
Lovina Beach. Beach tsara indrindra any Bali Avaratra